UbuntuMM – Ck4Ubuntu
Fuck OFF DDOS
July 7, 2016 chitkoko	Leaveacomment UbuntuMM
You guy are so smart!
I Don’t fucking care your DDOS attack.
March 17, 2016 chitkoko	Leaveacomment Community, My Story, Ubuntu, UbuntuMM
Ubuntu Myanmar LoCo Team is an officially verified team by the Ubuntu Council established with the objective of providing support for ease in use of Ubuntu Operating System in Computers across Myanmar.
Ubuntu for Myanmar initiated in 2009 since than, it has beenayouth focused organization that has been actively organizing Ubuntu and Open Source Software related events, workshops and offered free classes on Open Source software. It has been praised by the IT communities and portrayed as the most active organization for hosting events frequently.
Ubuntu intermediate class
With the invitation from the Ubuntu Council in late 2010, organization transformed into LoCo Team standing for LoCo community, whose aim is to offer support for Ubuntu locally. The Ubuntu Myanmar LoCo Team has been completely approved for its excellent qualifications by the Ubuntu Community Council on 16 November 2011.
Ubuntu Myanmar LoCo Team is One of the active and officially recognized LoCo team in Asia among the 60 total LoCo teams. A team requires re-approval on every3years basis and it is only approved if the team demonstrates its goals clearly and executesaactions to achieve them.
The Myanmar team focuses on distributing, advertising and demonstrating Ubuntu within Myanmar (Burmese). Through the development of our projects we focus on the areas of schools, business and home users.
Please see Flickr Event Photo for the latest news on our activities and events.
For other activities check out our Launchpad Page .
for mor information Ubuntu Myanmar LoCo Team
for mor information Team Leader
*Ko Ko Ye`*
+95 7989 22022
+95 94500 22022
84AD DC93 A99F D2C9 46A7
F3F5 F7BB 5804 D527 BE22
Tags: community, Office for Ubuntu, Ubuntu Myanmar Lo Co Team, ubuntu myanmar loco team, ubuntu-mm, Ubuntu-MM events, UbuntuMM	|
Variety Wallpaper Changer for Ubuntu
March 4, 2016 chitkoko	Leaveacomment Community, install20things, Installaltion, Ubuntu, UbuntuMM
Terminal ကိုဖွင့်ပါ။ ပြီးနောက် အောက်ပါ command တို့ကိုရိုက်ပါ ။
sudo apt-get install variety; sudo apt-get install -f
သွင်းပြီးနောက် Terminal တွင် အောက်ဖော်ပြပါ command ကို ရိုက်ပါ ။
General Tab တွင် သင် လိုအပ်သလို အချိန် များ ၊ wallpaper source များကို ရွေးချယ်နိုင်ပါမည် ။
Tip and Trick တို့ကို နောက်ဆုံး ဒုတိယ Tab တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည် ။
credit to :http://peterlevi.com/variety/
Tags: apt-get, CLI, community, Installation, Office for Ubuntu, Software, ubuntu myanmar loco team, ubuntu-mm, variety	|
DIY Arduino IR remote control car
March 2, 2016 chitkoko	Leaveacomment Community, UbuntuMM
Require parts :
1. Arduino UNO(can use nano,mega ..)
3. IR receiver
4. Robotic wheels
5. LEDs (4 LEDs in this project)
6. Some jumper cables
7.abattery
8.IR transmit remote
9.Cart and some suppliers ( car frame ကို မိမိတို့ဆန္ဒရှိသလိုတည်ဆောက်နိုင်ပါသည်)
ပထမဦးစွာroboticwheelsများအား L298N(motor driver) သို့ ချိတ်ဆက်ပါမည်။ထိုသို့ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် robotic wheels4လုံးအား cart တွင်တပ်ဆင်ပါ(wheels များတွင် jumper ကြိုးများ solder ပြီးဖြစ်ရပါမည်)။ motor driver L298N အားလည်းတပ်ဆင်ပါ။ ပြီးလျင် roboic wheels များ၏ motor လည်သည့် directionကို wheelနှစ်လုံးစီချိန်ကိုက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက်cart၏ဘယ်ဘက်ရှိအရှေ့wheel မှကြိုးနှစ်စ အားpowerပေးပြီးUNO ရဲ့5V,GNDတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးwheelအား run ကြည့်ပါ forward
(counterclosewise)လည်ရမည်၊( reverse လည်နေလျှင်ကြိုးကိုလှည့်တပ်ပါ) ပြီးလျှင် forward လည်နေစဉ် joinထားသောwheel၏5Vကြိုးအားမှတ်သားထားပါ။ထို့နောက်cart၏ဘယ်ဘက်ရှိအနောက်wheelကိုလည်း forwardလည်စေပြီး 5Vကြိုးအားမှတ်သားပါ။ ပြီးလျှင် ၎င်း 5Vနှစ်ကြိုးအားပူးပြီး L298N motor driver ၏ OUT 1 port တွင် ချိတ်ဆက်ပါကျန်GND နှစ်ကြိုးအားOUT 2တှငျခြိတျဆကျပါ။ထို့နောက် ညာဘက်မှ wheels နှစ်ခုအားလည်းထိုကဲ့သို့ direction စမ်းသပ်ပြီး 5V ကြိုးနှစ်စအားOUT 3တွင်ချိတ်ဆက်ပါ ကျန်GND နှစ်ကြိုးအားOUT4တွင်ချိတ်ဆက်ပါ။အထက်ပါအဆင့်နှစ်ဆင့်အားသေချာစွာတပ်ဆင်ပြု လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည် သို့မှသာနောက်ပို်င်းတွင် direction မမှန်ခြင်း ပြသနာပြန်ဖြေရှင်းရခြင်းများမှကင်းဝေး ပါမည်။
ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်မှာမိမိ control လုပ်မည့် IR code ကိုသိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ဦးစွာ IR receiver နှင့် UNO ကိုချိတ်ဆက်ပါ
IR out to UNO pin 11
IR GND to UNO GND
IR 5V to UNO 5V
ပြီးနောက် IR library ကိုArduino IDE သို့ add ပေးရမည်
https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote မှ Zip file ကို down ပြီးArduino IDE သို့ add ပေးရမည်
Arduino IDE >> sketch >>include library>> add .zip file
ထို့နောက် မိမိ remote မှ IR code ကိုသိရှိရန် အောက်ပါ Program ကို UNO သို့ သွင်းပြီး serial monitor ကို ကြည့်ပါ
/* The IR sensor’s pins are attached to Arduino as so:
Pin 1 to Vout (pin 11 on Arduino)
Pin3to Vcc (+5v from Arduino)
/*******************CODE BEGINS HERE********************/
Serial.println(results.value,HEX); // Print the Serial ‘results.value’
Remote မှ ခလုတ်များနှိပ်ကြည့်သောအခါ serial monitor တွင် သက်ဆိုင်ရာခလုတ်၏ HEX code ကိုတွေ့ရ ပါမည်။သတိထားရန်အချက်မှာremoteအားIRreceiverသို့ချိန်လိုက်သည့်အခါ နံပါတ်များထွက်နေတက်ခြင်း ခလုတ်အားဖိနှိပ် ထားလျှင် FFFFFF များထွက်တက်ပါသည်။ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်စဉ်ထွက်ပေါ်လာသော HEX ကုတ်မှာယင်းခလုတ်၏သက်ဆိုင်ရာcodeဖြစ်ပါသည်။ယခုprojectအတွက်controlခလုတ်ပေါင်း5ခုလိုအပ်သည့် အတွက်မိမိနှစ်သက်ရာခလုတ်5ခု ၏ code အားမှတ်သားထားပါ final program တွင်ပြန်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါအဆင့်2ဆင့်ပြီးသွားသည့်အခါ ပါဝင်သော parts များ(wheels,IRreceiver,LEDs,battery, L298N. arduino UNO)ကို cart တွင်နေရာချပါ။ပြီးလျင် parts များအား jumper ကြိုးများဖြင့်တွဲဆက်ပါမည်။wheels4လုံးနှင့် L298N မှာအပေါ်အဆင့်ကတည်းကတွဲဆက်ပြီဖြစ်၏။ဆက်လက်ပြီးတွဲဆက်ရန်မှာ …..
1.For IR to UNO …
IR OUT pin to UNO pin 4
IR GND pin to UNO GND pin
IR 5V pin to UNO 5V pin
2.For L298N to UNO ….
L298N GND pin to UNO GND pin
L298N 5V pin to UNO 5V pin
L298N IN1 pin to UNO pin 10
L298N IN2 pin to UNO pin 9
L298N IN3 pin to UNO pin 6
L298N IN4 pin to UNO pin 5
3.For Battery to UNO and L298N
Battery 6V(red)pin to L298N 12V port
Battery 6V(red)pin to UNO Vin
Battery GND(black)pin to L298N GND port
4.LEDs to UNO
Front right LED’s anode pin to UNO A4
Front left LED’s anode pin to UNO A5
Back right LED’s anode pin to UNO pin 2
Back left LED’s anode pin to UNO pin 3
All LED’s cathode pin to UNO GND
5.Power switch ကို battery နှင့် L298N ကြားတွင်တပ်ဆင်ပါ
**5V နှင့် GND ကြိုးများ မလောက်လျင် common ချိတ်ဆက်ပါ**
Parts များအားလုံးတပ်ဆင်ပြီးသောအခါ မောင်းရန်အသင့်ဖြစ်နေသော ကားလေးကို ရရှိနေပေပြီ နောက်ဆုံးအဆင့် နောက်ဆုံး program သွင်းရန်သာကျန်ပါတော့သည်။
ထိုprogramကို down ပြီး UNO သို့ install ကာ control လုပ်နိုင်ပါပြီ။
**အရေးကြီးသည်မှာအဆင့် 2တွင်မှတ်ထားခဲ့သော မိမိတို့၏ IR HEX code များကို program ရှိကုတ်များနေရာတွင်အစားထိုးရန် လိုပါသည်။**
ထိုသို့ထည့်သည်အခါ 0x ၏အနောက်တွင်ထည့်ပါ 0x မပါလျှင် အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ၊
ယခုprojectအားအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ပြီးသည်အခါ အခြားနောက်ထပ် Blue-tooth control,radio RF control car project များအတွက် လွယ်ကူသွားပါမည်။
San Aung Zin
for more information please contact to : primarysanzinmail@gmail.com
Tags: ARDUINO, DIY	|